Ihe I Nwere Ike Ime Gbasara Nsogbu Ezinụlọ
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Janet kwuru, sị: “Obere oge papa m nwụchara, di m gwara m na o nwere nwaanyị ya na ya na-akpa. Mgbe obere oge gachara, ọ gwaghị m ihe ọ bụla ọzọ, ya ewekọrọ uwe ya, hapụ mụ na ụmụ anyị abụọ.” Janet chọtara ọrụ, ma, ihe a na-akwụ ya anaghị ezuru ya iji lekọta ụmụaka ha. O nwekwara ihe ọzọ na-aka enye ya nsogbu. Janet kwuru, sị: “Abịara m na-echegbu onwe m n’ihi na naanị m na-arụzi ọrụ nne na nna kwesịrị ịrụ. Ọ na-ewute m na enweghị m ike inye ụmụ m ihe niile dị ha mkpa otú nne na nna ndị ọzọ si enye ụmụ ha. M na-echegbukwa onwe m gbasara otú ndị ọzọ si ele mụ na ụmụ m anya. Amaghị m ma hà na-eche na ihe mere di m ji hapụ anyị si m n’aka.”
Ekpere nyeere Janet aka ya akwụsị ịna-echegbu onwe ya, ya na Chineke adịkwuokwa ná mma. Janet kwuru, sị: “M na-aka echegbu onwe m n’abalị ma ebe niile daa jụụ. Ma, m kpee ekpere, gụọkwa Baịbụl, m na-enwe ike ihi ụra. Ebe na-akacha atọ m ụtọ na Baịbụl bụ Ndị Filipaị 4:6, 7. Ebe ahụ sịrị: ‘Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, jirinụ ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke nke karịrị echiche niile ga-eche obi unu na ike iche echiche unu nche.’ Ọ na-abụ m kpechaa ekpere n’abalị, Jehova emee ka obi ruo m ala.”
N’otu oge Jizọs na-ezi ndị mmadụ ihe n’elu ugwu, o kwuru ihe ga-enyere anyị aka ma e nwee ihe na-echegbu anyị. Ọ sịrị: “Nna unu maara ihe ndị na-akpa unu tupu unu arịọ ya.” (Matiu 6:8) Anyị kwesịkwara ịrịọ ya ka o nyere anyị aka. Ihe kacha mkpa anyị ga-eme iji ‘bịaruo Chineke nso’ bụ ikpe ekpere. Anyị bịaruo ya nso, ‘ọ ga-abịarukwa anyị nso.’—Jems 4:8.
E nwekwara uru ọzọ ekpere na-abara anyị ma e wezụga ime ka obi ruo anyị ala. Jehova, bụ́ “Onye na-anụ ekpere,” na-emekwara ndị niile nwere okwukwe na ya ihe ha na-arịọ ya. (Abụ Ọma 65:2) Ọ bụ ya mere Jizọs ji gwa ndị na-eso ụzọ ya “ka ha na-ekpe ekpere mgbe niile ma ghara ịda mbà.” (Luk 18:1) Anyị kwesịrị ịnọgide na-arịọ Chineke ka o nyere anyị aka ịma ihe anyị ga-eme mgbe ihe siiri anyị ike, ma nwee okwukwe na ọ ga-aza ekpere anyị. Anyị ekwesịghị inwewe obi abụọ ma ọ̀ dịkwa Chineke n’obi ịza ekpere anyị ma ọ bụkwanụ ma ọ̀ ga-azali ya. Anyị si otú a na-ekpe “ekpere n’akwụsịghị akwụsị,” anyị na-egosi na okwukwe anyị siri ike.—1 Ndị Tesalonaịka 5:17.
OTÚ ANYỊ GA-ESI EGOSI NA ANYỊ NWERE OKWUKWE
Gịnịdị ka mmadụ inwe okwukwe pụtara? Ihe so n’ihe anyị ga-eme tupu a sị na anyị nwere okwukwe bụ ‘ịmata’ onye Chineke bụ. (Jọn 17:3) Anyị ga-ebu ụzọ mụọ Baịbụl mata ihe bụ uche Chineke. Anyị ga-amụta na Chineke na-ahụ onye ọ bụla n’ime anyị nakwa na ọ chọrọ inyere anyị aka. Ma, ọ bụghị naanị ịmụta gbasara Chineke ga-egosi na anyị nwere okwukwe siri ike. Kama, anyị ga na-akwanyekwara Chineke ùgwù ma gbalịa ka anyị na ya bụrụ enyi. Anyị chọọ ka anyị na mmadụ bụrụ enyi, anyị ga-agbarịrị mbọ na-akpakwu ya nso. ‘Okwukwe anyị ga-adị ukwuu karị’ ma ọ bụrụ na anyị na-amụtakwu gbasara Chineke, “na-eme ihe dị ya mma,” ma na-ahụkwa otú o si enyere anyị aka. (2 Ndị Kọrịnt 10:15; Jọn 8:29) Ọ bụ ụdị okwukwe a mere ka Janet kwụsị ịna-echegbu onwe ya.
Janet kwuru, sị: “Ihe kacha nyere m aka inwekwu okwukwe bụ na m na-ahụ otú Jehova si enyere m aka ná nsogbu m niile. O nwere ọtụtụ mgbe a na-emegbu anyị, ya adị m ka nke anyị na-eme ọ̀ gwụla. Ma ọ na-abụ, anyị kọọrọ Jehova mkpa anyị ugboro ugboro, ya esi otú m na-atụghị anya ya za anyị ekpere. Mgbe m na-ekele Jehova, m na-echeta ọtụtụ ihe ọma ndị o meerela m. Ọ na-enye anyị ihe anyị chọrọ mgbe ọ ga-akacha abara anyị uru. O meela ka m nwee ezigbo ndị enyi, ma ụmụnna ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Ha na-enyere mụ na ụmụ m aka mgbe niile. Ụmụ m na-amụtakwa ihe n’àgwà ọma ha.” *
“Ama m ihe mere Jehova ji kwuo na Malakaị 2:16 na ya ‘kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.’ Di ma ọ bụ nwunye hapụ ibe ya, gbakwuru nwoke ọzọ ma ọ bụ nwaanyị ọzọ, obi na-agbawa onye nke aka ya dị ọcha. Ọtụtụ afọ agaala kemgbe di m hapụrụ m, ma owu ka na-ama m, ya ana-adịkwa m ka o nweghị uru m bara. Mgbe ọ bụla ọ dị m otú a, m na-agbalị chọọ ihe m ga-eme ga-abara onye ọzọ uru. Ihe a m na-eme na-enyere m aka.” Baịbụl gwara anyị ka anyị ghara ịna-akpa iche. Ime ihe a Baịbụl kwuru nyeere Janet aka, ya aghara ịna-echegbu onwe ya. *—Ilu 18:1.
Chineke bụ “nna nke ụmụ na-enweghị nna nakwa onyeikpe nke ndị inyom di ha nwụrụ.”—Abụ Ọma 68:5
Janet kwukwara, sị: “Ihe kacha nyere m aka bụ ịmata na Chineke bụ ‘nna nke ụmụ na-enweghị nna nakwa onyeikpe nke ndị inyom di ha nwụrụ.’ Ama m na o mekataghị hapụ m otú di m mere.” (Abụ Ọma 68:5) Janet ma na Chineke anaghị eji “ihe ọjọọ” ele mmadụ ule. Kama, ọ na-enye anyị niile amamihe na “ike karịrị ike nkịtị” ka anyị ghara ịna-echegbu onwe anyị maka nsogbu ọ bụla bịaara anyị.—Jems 1:5, 13; 2 Ndị Kọrịnt 4:7.
Ma, gịnị ga-enyere anyị aka ma ọ bụrụ na anyị na-echegbu onwe anyị maka ihe ọjọọ nwere ike ime anyị?
^ para. 9 Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 10:13; Ndị Hibru 4:16.
^ para. 10 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe ga-enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị, gụọ ihe e kwuru n’isiokwu ndị mbụ gbara na Teta! Septemba–Ọktoba 2015, nke isiokwu ya bụ “Ndụ Gị Ọ̀ Dị Otú Ị Chọrọ Ka Ọ Dịrị?” Ọ dịkwa na www.jw.org/ig.